Webdesign Ku Baro Af-Soomaali: Casharka 7aad - AqoonKaal.com
Casharkan waa kii 7aad ee casharro xiriir ah oo ku saabsan naqshadaynta iyo dhismaha muuqaalka guud ee website (Webdesign ku baro Af-Soomaali) oo aad kala socotaan AqoonKaal.com..
macalin maxamed aad ayaad umahadsantahay
designka sifiican ayaan kaaga faa’iidaystay
inuu noogu sooxigo suuragal thanx ustaad.
ali said ali says:
macalin maxada aad iyo aadayaad umahadsantahay lakii waxaa dhiman waxyar dhamaytir ilaahay baa kaa ajarsiinaaya
Macalin casharka 7aad xeerkaan
markaan isticmaalay sawirdada computerka gudihiisa waa ka muuqanayaan, laakiin Fz maka muuqanayaan si walba aan u update gareeyey, hase ahaatee markii aan sawirada,css iyo index hal meel kawada dhigay waa shaqeeyeen sida
Macalin intaan casharka 8aad u gudbin halmar iiga saxbo
Axmed xirsi waa arrin fiican, laakiin waxaa kasii fiicnaan lahayd
taas php/mysql, sababtoo ah suuqa ayagaa maanta in demand ka ah oo loogu baahi badan yahay. Isbuuci dhawayd ayaan waxaan booqday website soomaaliyeed maamul kamid ah websitekaas ayaa wuxuu iclaaminaayey in ubaahan yahay qof wax yar ka yaqaano php si uu websitekaas ugu kaalmeeyo taas waxaad ka fahmi website-yada somalida ugu waa weeyn xataa aad ugu baahan yihiin. Macalin haddii ay macquul tahay mustaqbalka casharro ku saabsan php/mysql inaad noosoo diyaariso waa fiicnaan lahayd oo waxaa noqon lahayn arday dhisin oo baahida website-yada somalida daboola. sidoo kale arday ka xiran casharradaan ayaa maalin dhawayd shaqo ahaan loo lasiiyey in uu website school iyo community u dhiso, aadbuuna kaaga mahad celinaayey. waxaan ku dhahay madaama aad ku aflaxday aqoonkaal macalinka email u dir anagana coffee naga dhiiib lol.
aad baad u mahad san tihiin
Ilaahay baa ka abaalmarin doona sida ciidan ee aad ugu faa’iideysay dadka u baahan casharadan
ASC Mahadsanid walaal Mustafe.